Wana mari inosvika €500 paawa neBitcoin
Kunyangwe crypto ikaparara
Kuti utange, zadza fomu riri pazasi:
Kugamuchirwa ku Bitcoin Trend App!
Kuita mari neBitcoin hakufanirwe kuve kwakaoma.
Nekusaina kuburikidza nepuratifomu yedu yakapusa, unogona kutanga kuita purofiti mukati memaminitsi ekusaina. Iyo app inoshanda kubva chero kupi neinternet. Saka iwe unogona chaizvo kubatsirwa kubva kumahombekombe.
Iyo app yakagadzirirwa munhu wese. Izvi zvinoshanda kunyange kana usati wambotengesa kare. Uye kunyangwe iwe usingazive chero chinhu nezveBitcoin. Muchokwadi, zvishoma zvaunoziva, zviri nani. Nekuti hauna rusaruro.
Iyo app inoshanda pane chero mudziyo. Aya ndiwo mabatsiriro aungaita kubva komputa yako, laptop, foni kana piritsi.
Vamwe varikuti kudii nezve app yedu?
Yakakosha Yambiro Yenjodzi: Kutengeserana FX neCFDs kunosanganisira njodzi yakakura yekurasikirwa nekuda kwekuwedzera kwekuita kwekutengesa izvo zvinogona kukonzera kurasikirwa kwese kwemari yako uye inogona kunge isingakodzeri marudzi ese evanoisa mari. Ndokumbira uverenge yambiro yedu yakazara yenjodzi uye mutengesi akakodzera wawakanyoreswa naye kuti uve nechokwadi chekuti unonzwisisa njodzi usati waenderera, uchifunga nezve chiitiko chako chakakodzera. Kana zvichidiwa, tsvaga mazano akazvimiririra. Ruzivo rwuri pawebhusaiti ino uye mumagwaro ekuburitswa ruzere muzvarirwo uye harinei nemamiriro ako pachako, mamiriro emari kana zvaunoda. Iwe unofanirwa kuongorora chibvumirano chebrokerage nekuchenjerera uye kutsvaga zano rakazvimirira usati wafunga kana kutengesa mune izvo zvigadzirwa zvakakukodzera iwe.